Imboni Ipaki - SHANGHAI KAIQUAN PUMP (GROUP) Co., Ltd.
IShanghai Industry Park
IHefei Industry Park
IShijiazhuang Industry Park
IShenyang Industry Park
IZhejiang Industry Park
Ngokwenzuzo yokuthengisa, iShanghai Kaiquan ibekwe endaweni engu-1 iminyaka eyi-15 ilandelana embonini yepompo yaseChina kwathi ngo-2019 ivolumu yokuthengisa yaleli qembu ingu-850 million USD. Ngosizo lwezinhlelo ze-ERP & CRM, i-KAIQUAN inikeza izixazululo zobuchwepheshe kuwo wonke amakhasimende emakethe yezilwandle. Ngaphezu kwalokho, i-KAIQUAN isungule inethiwekhi yensizakalo kazwelonke enezinkampani ezingama-32 zokuthengisa zamagatsha nezinhlangano ezingama-361. Ukukhiqiza imikhiqizo yokuncintisana nethembekile yamakhasimende anelisayo yinto yokuqala eza kuqala kaKaiquan.
Imikhiqizo Main: Split casing pump, Vertical Mixed pump flow, Vertical Axial flow pump, Boiler feed pump pump, Water ring vacuum pump, Vertical multistage pump, Water booster pump, Iphaneli yokulawula & uhlelo, Ukusakazwa kwepompo yamanzi, Ipholishi ye-Condensate, zonke izinhlobo zempompo ezisetshenzisiwe imboni yezitshalo zamandla enuzi.
Ikheli: No. 4255, Caoan Road, Jiading District, Shanghai, China
Ngo-2008, iKaiquan Group yathenga iHefei Sanyi Motor & Electrical Pump Co., Ltd. yashintsha igama layo yaba yiHefei Kaiquan Motor & Electrical Pump Co., Ltd. Ihlanganisa indawo ephelele engama-270,000 square metres nendawo yokwakha engama-230,000 square metres yokukhiqiza . Njengamanje, inabasebenzi abangaphezu kwe-1500 okubandakanya onjiniyela abangama-278 nabanjiniyela abaphezulu abangama-56. Kunezinsiza ezisezingeni eliphakeme zokuhlola, zokuhlola nokuklama izinjini ezingaphansi kwamanzi namaphampu lapha.
Imikhiqizo Main: Imoto engena ngaphansi, ipompo elicwilizayo, ipompo lokulahlwa kwendle, ipompo elwa nomlilo, ipompo egelezayo ye-Axial egelezayo, ipompo eligelezayo elixubekile le-Submersible, uhlelo lwe-Submersible Packing, Iphaneli yokulawula, i-Split case pump, ipompo lesiteji esisodwa njalonjalo.
Ikheli: No. 611, Tianshui Road, Hefei Xinzhan District, Hefei idolobha, Isifundazwe sase-Anhui, eChina
Imikhiqizo Main: Zonke izinhlobo zempompo slurry esetshenziselwa iMinging, ukukhiqizwa kwamalahle, isitshalo samandla, ukudonswa komfula, i-Alumina neminye imboni.
Ikheli: Imboni Area ZHENGDING County, Isifundazwe Hebei, China
UShengyang Kaiquan unemishini ephelele yokukhiqiza nezindawo zokuhlola, abasebenzi abaphethe kahle, abaphathi abaqinile nenhlangano esekwe kuzinqubo nemibhalo yezinhlelo zamazwe omhlaba ze-IS09001 eziqinisekisa ukunikeza umkhiqizo omuhle kumakhasimende womhlaba wonke.
Imikhiqizo Main: I-API610 Chemical process pump ihlangabezana nezidingo ze-API6107 ANSI B73.1M ne-IS02858
Ikheli: Cha. 4, 26th Road, Shenyang ET District, Shenyang idolobha, Isifundazwe Liaoning, China
Imikhiqizo Main: Iphampu yesiteji esisodwa, ipompo elimaphakathi, ipompo lokudonsa lokugcina
Ikheli: Indawo Yezimboni eseMpumalanga Yurophu, Yongjia County, Wenzhou Idolobha, Isifundazwe Zhejiang, China